JAAMACADDA HARGEYSA: SHAHAADO NOOC CASRI AH OO LA DAAHFURAY, KUWII HORE OO LA BEDELAN KARO – Somali Schools
JAAMACADDA HARGEYSA: SHAHAADO NOOC CASRI AH OO LA DAAHFURAY, KUWII HORE OO LA BEDELAN KARO
Maamulka sare ee Jaamacada Hargeysa (Senate)waxay ku dhawaaqeen, in wax laga bedeley shahadadii hore ee Jaamacada Hargeysa, waxaan ay soo bandhigeen shahaadada Cusub ee Jaamacadu yeelan doonto.
Gudoomiyekuxigeenka Akaada miga iyo Cilmi-baadhista Jaamacadda Hargeysa, Ass. Prof. Saeed Mohamed Jibril oo xafladan daahfurka ka hadlay ayaa ugu horayn soo dhaweeyay horumarka aadka u badan ee ay jamacadu gaadhay dhawrkii bilood ee ugu danbeeyay. Isagoo hadalkiisa sii wata, ayuu gudoomiye ku xigeenku sheegay in jaamacadu hiigsanayso qorshe aad u fog, Qaar kale oo u qabsoomayna ay dhawaan soo bandhigi doonaan.
Registrarka jaamacada, Mustafe Khadar ayaa s
oo bandhigay shahadadii cusbayd, iyo sababaha loo badalay kuwii horaba. Waxa uu ku soo koobay sababahaasna:-
Quality/Tayada:- Shahadadan cusubi waa ay ka tayo badantahay tii hore, Iskuma jabayso, hadii biyo ay ku dhacdana waxbanoqonmayso (Water proof).
Modern: – Shahadadani cusubi waxa ay la talaabsanaysaa standard ka shahadooyinka caalamiga ah, waxa ay la mid tahay shahadooyinka laga isticmaalo Maraykanka, Australia, Egypt iyo Ethiopia.
Security: – Heerka amaanka shahadadani aad ayuu u sareeyaa, lama foojargaraynkaro, lamana copy garaynkaro, lama sawirikaro, si kalana looma isticmaali karo.
Standard:- Shahaadadan cusubi waxa ay leedahay features aad u sareeya. Waxa ay ka samaysantahay currency paper. Waxa ay leedahay dry stamp aan laga fujin karayn shahadada, lana foojargarayn karayn.
Gudoomiye ku xigeenka jaamacada Hargeysa ee maamulka iyo horumarinta Maxamed Ali Hersi iyo Hormuudada kuliyadaha caafimaadka, shuruucda, carabida iyo barashada diinta islamaaka ayaa Iyana ka hadlay xafladan daahfurka shahadada cusub ee jaamacadda Hargeysa. Waxay si isku mid ah u xuseen horumarka ay jaamacadu ku talaabsatay, oo ay ka mid tahay tan maanta wax lagaga badalay shahaadadii hore ee Jaamacadda Hargeysa. Waxa sidoo kale xafladda ka hadlay qaarka mid ah macalimiinta iyo ardayda Jaamacada.
Xaflada waxa sooxidhay Madaxwaynah ajaamaca
da Hargeysa Dr. Mahmoud Yusuf Musa isagoo s irasmi ah ugu dhawaaqay in ay jaamacadu badashay shahadadii hore. Waxa uu Madaxwaynaha jaamacadu dul-istaagay iftiimiyayna in aanay taamacnaheedu ahayn in aanay shahadooyinkii hore ee jaamacadu shaqaynahayn, ee ay kuwaa horana ay sharci yihiin. Waxa uu ku dhawaaqay in laga bilaabo maanta ay arday kasta ay u furantahay in uu qaato shahadadan cusub. Sidoo kale kuwii horana ay badalan karaan tan cusubna qaadan karaan.
University of Hargeisa, towards a better future
Xafiiska Xidhiidhka dadwaynaha, Jaamacadda Hargeysa